भारतमा भोलिबाट चुनाव– ९० करोड मतदाताले छान्नेछन् ५ सय ४३ सांसद् - Narayanionline.com
काठमाडौं– बिहीबार बाट आगामी मे १९ सम्म ७ चरणमा चल्ने चुनाव कसले जित्ला ? मोदीले दोश्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउलान् वा नपाउलान् ? चुनावपछि भारतमा सरकार फेरिएसँगै ५ वर्षको म्यान्डेट लिएर आउने नयाँ सरकारका नीति र कार्यक्रमहरु कस्ता आउने हुन् ? लगायतका कुरा त मे २३ बाट शुरु हुने मत गणना र त्यसपछि सार्वजनिक हुने मतपरिणाम पछि छर्लङ्गै हुनेछ ।
तर, संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा हुन लागेको निर्वाचन र कस्तो परिवेशबीच चुनाव हुन लागेको हो, त्यो भने अर्को रोचक पाटो छ । संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतको जनसङ्ख्या १ अर्ब ३० करोड भन्दा धेरै छ । यो जनसङ्ख्या अनेक भाषा, जाति, धर्म, सँस्कृतिमा छरिएको छ ।
यससँगै भारतमा विश्वमा लोकतान्त्रिक विधिबाट हुने निर्वाचनमा मतदानका लागि सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्यामा मतदाता छन् । भारतमा मतदाताको सङ्ख्या ९० करोडभन्दा धेरै रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यसअघि सन् २०१४ मा भएको निर्वाचनमा ८१ करोड मतदाता मतदानका लागि योग्य रहेकोमा यसपटकको निर्वाचनमा यो सङ्ख्या करिब ९ करोडले बढेर ९० करोड पुगेको बताइएको छ ।
यी ९० करोड मतदातालाई मतदान गर्नका लागि १० लाख भन्दा धेरै मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ । चुनावका लागि भने जम्मा ८ हजार २ सय ५१ जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन् ।
सन् २०१७ मा भारत विश्वको छैटौँ ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्न सफल भएको थियो । यस वर्ष भने भारतले बेलायतलाई उछिनेर विश्वको पाचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने दिशामा अधि बढिरहेको बताइन्छ । त्यसबाहेक भारतको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनी रहेको बताइन्छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार भारतमा १७ करोड जनता चरम गरिबीको अवस्थामा छन् अर्थात् उनीहरुले दैनिक १ दशमलब ९ डलरभन्दा कम कमाउँछन् ।
त्यस्तै, विश्वका सबैभन्दा प्रदूषित शहरहरुमा भारतीय शहरहरुको नाम पनि अग्रस्थानमा आउँछ । एअर भिजुअल नामक संस्थाले हालै जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार विश्वका सबैभन्दा धेरै प्रदूषण हुने १० शहरमध्ये भातरका मात्र ७ शहरहरु छन् ।
यस्तो अवस्थामा भारतमा हुन लागेको चुनावलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । त्यस्तै, भारतको सदन लोकसभामा ५ सय ४५ जना सांसद् रहने व्यवस्था छ । यीमध्ये दुई जना बेलायती मूलका भारतीयलाई मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ भने बाँकी ५ सय ४३ सांसद् आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हुने चुनावमा विजयी भएर आउनेछन् ।
यसअघि सन् २०१४ मा भएको निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी भाजपाले सर्वाधिक २ सय ८२ सिट जितेर सरकार बनाएको थियो । यसबीच सबैभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र भएको तथा सबैभन्दा धेरै सांसद् चुनेर राजधानी नयाँ दिल्ली पठाउने राज्य चाहीँ उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेशले सबैभन्दा धेरै ८० सांसद् चयन गर्छ ।
यस्तो अवस्थाका बीच शुरु हुन लागेको चुनावबाट कस्तो परिणाम आउला ? त्यसका लागि मत परिणाम कुर्नैपर्ने हुन्छ ।
काठमाडौंमा बन्द गराउँदै हिड्ने नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यसहित प्रचण्ड-माधव पक्षका नेता पक्राउ
भरतपुर विमानस्थल विस्तारः सेनाको ब्यारेक आँपटारीको दियालो बंगलामा सार्ने सहमति
बाइस वर्षमा नभएका काम दुई वर्षमा भयोः मन्त्री बाँस्कोटा
म कसैको लोभ र डरमा काम गर्दिनँःनवनियुक्त कृषिमन्त्री भुसाल
निर्मला प्रकरणः शङ्काको सुई फेरि दिलीपसिंह विष्टतिर